I-D2M Ikhamera ye-oblique enamalensi amahlanu I-3D modelling system ifektri nabakhiqizi | Imvula
I-D2M iyikhamera etshekile ehambisanayo ephezulu eyakhiwe yi-Rainpoo ngokusekelwe kumpendulo yekhasimende kanye nezimfuno kanye nesisekelo semikhiqizo yochungechunge lwakudala(D2). Fanisa ne-DJI M300 RTK, ingafinyelela u-1:500(ukunemba ngaphakathi kuka-5cm) inhlolovo ye-cadastral ngaphandle kwama-GCP.
Lezi zinhlobo ezimbili zamakhamera we-oblique ziqhubeka nezinzuzo zesisindo esilula, usayizi omncane, ubude bokugxila obunengqondo kanye nezindleko eziphansi zokugcinwa kwemikhiqizo yakudala. Futhi zithuthukisa ukusebenza kahle kokulandwa kwedatha kanye nokuvumelana nezimo zezulu ezahlukahlukene. Ayilungele kuphela ama-UAV ochungechunge lwe-M210/M300, kodwa futhi ingathwalwa kwamanye ama-UAV anezirotho eziningi / aphiko olungaguquki ukwenza imisebenzi eyengeziwe. (I-D2M isebenza kuphela kuma-UAV anamarotha amaningi).
I-QTY yelensi 5 ama-pcs
Amaphikseli Asebenzayo 24.3MP(ilensi eyodwa)/120MP(inani)
Ubude bokugxila 25mm(Kuqondile)/35mm(Oblique)
Isisindo awu 780g
Usayizi Wenzwa APS-C,23.5*15.6mm
Isikhawu Sokuchayeka ≥0.8s
I-Lens angle 45 degree
Ukunikezwa kwamandla kagesi Amandla ahlanganisiwe e-SkyPort
Isivinini sokulanda idatha ≥300M/s
Izinga lokushisa lomsebenzi -10°C~+50°C